किन सोमबार नै गरिन्छ भगवान शिवको पूजा ? - नागरिक खोज
किन सोमबार नै गरिन्छ भगवान शिवको पूजा ?
१ महिना अगाडि • २६४ पटक पढिएको
काठमाडौँ- हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार सोमबार अर्थात आजको दिन भगवान शिवका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण दिन हो ।
सोमबारको शास्त्रहरुमा निकैं महत्वपुर्ण भूमिका रहेको कुरा विश्लेषण गरिएको छ ।
हरेक हप्ताको सोमबार आफैँमा एक महत्वपुर्ण दिन हो, यसलाई अर्को अर्थमा भगवान शिवको दिन पनि भन्ने गरिन्छ । आजको दिनमा भगवान शिवका भक्तहरुका लागि धेरै फलदायी मानिन्छ।
कसरी खुसी हुन्छन भगवान शिव ?
– आजको दिन तपाइँले सक्नुहुन्छ भने बिहान नभए बेलुका जुनसुकै समयमा मन्दिरमा जानुहोस् अनि दूध र चिनी मिश्री भगवान शिवलाई चढाउनुहोस ।
– भगवान शिवको लागि बेलपत्र सबैभन्दा प्रिय लाग्छ त्यसैले यसलाई चढाउनुहोस । यसरी तपाईले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न को लागि तपाईले भगवान शिव शंकरलाई हरेक सोमबारमा ११ वटा वेलपत्र चढाउनुहोस ।
– भगवान शिवलाई खुःशी राख्नको लागि कुनै एउटा मात्रै तरिका हुन्छ भन्ने हुँदैन । जस्तै तपाईले मन्दीरमा गएर दुध र मिश्र चढाउनुहुन्छ वा बेलपत्र भगवानलाई चढाउनुहुन्छ ।
– भगवान शिवलाई जलसँग गहिरो प्रेम भएको कुरा पुराणहरुमा उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरुमा भनिएको छ कि भगवान शिवलाई गंगाजलसँग गहिरो लगाब थियो । जसका कारण आज पनि हरेक हप्ताको समोबार भगवानलाई शुद्ध गंगाजाल चढाउने गर्नाले अर्थात यस जलले पूजा गर्नाले भगवान भक्तसँग खुसी हुन्छन भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ ।
भगवान शिवलाई खुःशी राख्न माथि भनिएका चार कुराहरु गरिसके पछि पनि केही काम बाँकी नैं हुन्छ जसले भगवानालाई खुसी बनाउँन महत्वपुर्ण भूमिका खेल्छ ।
त्यस्तै,तपाईले भगवान शिवशंकरलाई प्रसन्न राख्नको लागि जप्नुपर्ने मन्त्र हो,ॐ नमों शिवाय १ यस मन्त्रलाई तपाई सोमबार मात्रै होईन हरेक दिन जप्न सक्नुहुन्छ ।
साथ दिने हो भने जीवन भर दिनु केहि समयको साथ त मलामीले नि दिने गर्छन